MA ARKI DONAA MAALIN DADKEYGA OO MURANKA AN MACNAHA LAHAYN KU BEDELI DONA XIGMAD! – hogaanka.org
MA ARKI DONAA MAALIN DADKEYGA OO MURANKA AN MACNAHA LAHAYN KU BEDELI DONA XIGMAD!
Mala waa run heesta midhaheedu yahay “ Dadka kii u ildheer baa Ilay ugu ayaan daran” waxaa aan arkaa weli markabkii oo wajahaya jid aan sax ahayn. Waxay ahayd 26 June 1960 Markii ugu horeysey ee dal somaliyeed xor noqdo, dalkaasi wuxuu ahaa dalkaygii hooyo waxa uu xornimada ka qaatey gumeystihii Engiriiska. Habeenkaas Anigu kama aanan mid ahayn dadkii ka qayb galeyey damaashaadka balse sidaa aan maleenayo Hooyaday iyo Aabahay naxariistii Jano Alle ha geeyee ayaa ka mid ahaa dhalinyaradii nasiibka u heshay iney damaashaadkaa iyo farxadaasi ka qayb galaan,iyaga oo la mid ahaa dhamaan dadkii Somaliland ee wakhtigaa joogey oo meel kastaba oo ay joogeyn ku damaashaadeyey heesihii wadaniga ahaa iyo gabaydii calanka ee habeenkaas lagu damaashaadeyey.
Farxadaasi waxay soo gaba gaboowdey 1 July 1960 kii markii dalkii ugu horeyey ee taariikhda Somalida xor noqdaa uu si hadyad ah u bixiyey haybadii gobanimadii iyo sharaftii qaranimo oo uu ku wareejiyey dalkale oo wakhtigaa xornimadiisa ka qaatey Gumeystihii Talyaaniga.
Sida aan taariikhda Somalida ama wixii laga qorey qaar ka mida cadeynayaan, arinta ugu weyn ee salka u ahayd in jid qalad ah xornimadii dalkaasi marto waxaa kow ka ahaa daraasad la’aan,iyo qorsho xumo salka ku haysey dhinaca siyaasiinta wakhtigaa hogaaminayey dalka Somaliland oo wakhti siin fikirka iyo qorshaha ay la gelayaan dalkii ay la midoobayeen.Sidoo kale kamey maqneyn odayaal aan waxba isku ogoleen oo qabey intii habel oo reer habel ahi madaxweyne noqon lahaa xamarba ku dar.
Iyada oo daraasadaha qaarkood cadeynayaan in aaney Siyaasiintii reer koonfureedku ee wakhtigaasi aaney diyaarba u ahayn midnimo Somaliweyn balse ay ku mushquulsanayeen awood qabsi dhinaca maamulka ah oo ku koobnaa fonfurta ama Dalkii Somaliyeed ee Talyaanigu Gumeysan jirey.
Sida dabeecada Adamaha ay tahayba hadii ay marka laba arimood lays ku darsanayo mar walba kan sida xawliga ah u daneenaya arinku wuxuu ku qasban yahay inuu tanaasulkiisu badnaado waayo isaga ayaa wax raba oo wuu ku qasban yahay in uu shuruud la’aan uu isku dhiibo,arintu sidaa ayey iigu muuqataa markaan dersay sida ay wax u dhaceyn waayo hadii kale waa lagu gorgortami ahaa awooda qaabka loo qaybsanayo.
Arintaasi waxay dhashay in dariiqii wanaagsanaa ay ka leexato midowgii tabasho cadaalad daro oo badanina ay saameysanto,waxaa dadkii reer Somaliland markiiba dareemeen iney khalad taariikheed galeen,abwaanadii ayaa riwaayado iyo heeso ku soo bandhigay dareenkii shacabka.Saraakiishii ciidamadu waxay sameeyeen inqilaab fashilmay,Mudaharaado ayaa dadku dhigeen,balse waxaas oo dhan dheg cidina uma dhigin ee siyaasiintii reer koonfureedku dawladnimadoodii ay isku koobeen bay wateen. Waxaa la dilay madaxweynihii dalka ,waxaana xukunkii …………..
Mahad oo dhan Allah(swt) ayey u sugnaatey
How technology can boost accountability in education Previous
Xiaomi’s Mi Mix 2S is a more powerful take on an already beautiful phone Next